अज्मलको एकै ओभरमा पारसको ४ छक्का ! – WicketNepal
अज्मलको एकै ओभरमा पारसको ४ छक्का !
Birat Jung Rayamajhi, २०७३ कार्तिक २९, सोमबार ००:००
टु एक्स क्रिकेट युएसए कपको फाइनलमा पुर्ब बिश्व नम्बर १ एकदिवसीय बलर सईद अज्मलको एकै ओभरमा ४ वटा छक्का प्रहार गरेपछि नेपाली राइनोजका कप्तान पारस खड्काले वाहवाहि बटुलेका छन्।
अमेरिकाको मुसा क्रिकेट स्टेडीयममा सम्पन्न फाइनलमा हस्टन स्पार्क्सको प्रतिनिधित्व गरेका अज्मललाई पारस खड्काले कुनै मूल्य दिएनन् र एकै ओभरमा २४ रन प्रहार गरे। खेलको १४ औ ओभरमा बलिंग गर्न आएका अज्मललाई पारसले ओभरको पहिलो बलमै छक्का प्रहार गरि स्वागत गरेका थिए।
टेस्ट क्रिकेटमा पाकिस्तानको लागि सबैभन्दा छिटो १०० विकेट लिने अफस्पिनर अज्मलको पहिलो बलमै छक्का प्रहार गरेपछि पनि पारस रोकिएनन्। ओभरको तेश्रो, पाचौ र छैठौ बलमा पनि पारसले छक्का प्रहार गरे। लगातार बिशाल छक्का प्रहार गरेका पारसको अगाडी बिश्व क्रिकेटका कुनै बेलाका बलिंग जादुगर निरिह देखिए।
पारसले आक्रामक ब्याटिंग गर्दै ३८ बलमा ७७ रनको इनिंग खेल्ने क्रममा कुल ६ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे। अज्मलले आफ्नो ४ ओभरमा कुनै पनि विकेट हात पर्न सकेनन् र ५६ रन खर्चे जुन नेपाली राइनोजको जितको लागि महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो।